Xulka Qaranka Soomaaliya: Maxaa la gudboon markey dalka dib ugu noqdaan? - BBC News Somali
Image caption Ciyaartoyda ayaa u badan kuwa laga keenay dalka dibadiisa
"Waxa ugu weyn waxay ahayd in dhalinayarada la isu keenay iyo in markii ugu horeesay oo ay bannaanka ku wada ciyaareen. Kooxaha marka la isu keeno way adag tahay in ay isla qabsadaan, si ay isu bartaanna way adagtahay", sidaas waxaa BBC-da u sheegay Maxamed Axmed Deysane oo fallanqeeya ciyaaraha, horeyna uga mid ahaa laacibiintii xulkii qaranka Soomaaliya ee ka hor burburkii dowladdii dhexe.
"Dhallinyaradan xirfaddoodu waa heer sare; kooxo heerar kala duwan ka ciyaara ayayna ka tirsan yihiin, marka dhammaan dhallinyarad waxay diyaar u ahaayeen in ay calankooda iyo dalkooda matalaan", Ayuu yiri Siciid Cabdi Haybe.
Siciid wuxuu aaminsan yahay in Algeria, oo ku guuleysatay koobka Qaramada ee Qaaradda Afrika, ay ka faa'iiday dhallinyaradii dibadaha ka ciyaaraysay.
"Xulkii Algeria ee 23ka ka koobnaa hal mid oo kali ah ayaa ka dheelayay gudaha dalkooda." Ayuu yiri.
Image caption Soomaaliya ayaa lugtii hore ee ciyaartay guuleysatay
Sucaad Samaara oo ah gabar ka faalloota ciyaaraha ayaa BBC Somali u sheegtay: "Xilligan waxaa loo baahan yahay ciyaaryahanno khibrad u leh kubada cagta kuwaas oo ay ka go'antahay guul, tababar fiican iyo daryeelna waa in ay helaan".
Image caption Dad badan ayaa aaminsan in taageero ballaaran ay u baahan yihiin xulka Qaranka
"Xulka Qaranka Soomaaliya wuxuu u baahanyahay maalgalin xooggan waliba doorka dowladda iyo gacsatada ka maqan, waxbadan ayaa hagagaya haddii ay helaan maalgalintaas", ayay tiri Sucaad Samara.
Daysane dhankiisa wuxuu qabaa fikrad taa la mid ah wuxuuna yiri: "Kubada cagta adduunka waxay isu badashay lacag in la geliyo, anaguna waxaan u baahanahay in xiriirka kubadda cagta, dowladda, ganacsatada, dadweynaha ay lacag geliyaan ciyaartoyda Qaranka Soomaaliya, juhdi weynna la geliyo, si ay horey ugu sii socdaan."